Isku dhaca Turkiga, Imaaraadka ee arrimaha Soomaaliya - Axadle - Axadle Wararka Maanta
Hargeysa (Axadle) – Warbaahinta dalka Turkiga ayaa baahisay in loolanka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladaha Turkiga iyo Imaaraatka carabta uu meeshii ugu sareeyay gaaray markii uu ka dagaalamayay gudaha Soomaaliya.
Wakaaladda wararka Turkiga ee T54 ayaa sheegeysa in dagaalka siyaasadeed ee u dhexeeya Turkiga iyo Imaaraatka carabta uusan ku koobneyn oo kaliya taakuleyn militari oo loo fidinayo kooxaha ka soo horjeeda ee Liibiya balse uu ku eg yahay Soomaaliya.
Isutagga Imaaraatka Carabtu wuxuu u dagaallamayaa in Turkigu ballaariyo saameynta uu ku leeyahay Geeska Afrika, sidaa darteed markii Turkigu saldhig milatari ka sameystay axadle Soomaaliya ee Muqdisho, Imaaraadku wuxuu saldhig milatari ka sameystay magaalada Berbera, sida lagu sheegay T54.
Imaaraatka Carabta oo xiriir wanaagsan la leh Somaliland isla markaana sheegta inay ka go’day dalka intiisa kale ayaa ka faa’iideysaneysa loolanka siyaasadeed ee kala dhaxeeya Turkiga si ay u garab istaagaan dowladda federaalka Soomaaliya.
Warbixinta ayaa lagu yidhi “Intii uu Turkigu mudaharaadka ka dhigayay Axadle Soomaaliya ee Muqdisho, Imaaraadku wuxuu saldhig milatari ka dhisay magaalada Berbera ee gacanka Cadmeed wuxuuna taageeray Somaliland oo ku dhawaaqday madaxbanaanideeda 1991”.
“Juqraafi ahaan, Isutagga Imaaraatka Carabta wuxuu sii waday inuu ku ballaariyo milateri masaafo dheer si loo ilaaliyo dib u dhaca Turkiga.”
Khilaafka siyaasadeed iyo midka militari ee u dhexeeya Imaaraatka Carabta iyo Turkiga ayaa cirka isku shareeray kadib markii labada dowladood ay taageereen dagaalka ka socda Liibiya, halkaas oo Turkiga uu ku taageerayo dowlada Qaramada Midoobay ee laga aqoonsan yahay dalkaasi, halka Isutaga Imaaraatka Carabtuna uu garab taagan yahay General Khalifa Haftar.